Vehivavy Syriana Misaotra Ny Tafika Rosiana Amin’ny Kalandrie Vaovao Manaitaitra Novatsian’i Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2017 12:25 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Magyar, srpski, عربي, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Fikambanana tsy mitady vola efa ho 4.000 no nangataka vola fanampiana tamin'i Kremlin tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, ary nanantenana ny hahazo vola ho amin'ny tetikasa fampiroboroboana ny atletisma, ny soatoavina, ary ny siansa eny anivon'ireo tanora Rosiana. Manodidina ny 238 tapitrisa robla ( eo ho eo amin'ny 3,8 tapitrisa dolara) no nozaraina sy naparitaka tamina tetikasa 70 samy hafa. Nampiandraiketina manokana hampiasa ny vola azony amin'ny “fanapariahana ny lova ara-kolontsaina Rosiana” ny Fikambanana Rosiana ho an'ny tanora, iray amin'ireo mpandraharaha sivy nahazo fanampiana.
Tamin'ity herinandro ity, valo volana aty aoriana, nahatsapa ny tsiron'ny kolontsaina pop rosiana ny vahoaka : kalandrie raitra iray misy sarinà vehivavy syriana am-polony tsara tarehy, miaraka aminà andian-teny sahisahy izay midera ny fanelanelanana ara-tafika nataon'i Maosko tany Afovoany Atsinanana. Manao fehiloha “kokoshnik” ny vehivavy tsirairay, ” ho mari-panajàna an'i Rosia.”
Dikan'ilay kalandrie tsy dia manaitra filàna loatra azon'i Vladmir Putin enin-taona lasa izay, tamin'ny faha-58 taonany ity kalandrie ity, izay nampiseho sarinà vehivavy mitafy tapaka, mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana momba ny fanaovana gazety ao amin'ny oniversitem-panjakan'i Maosko ity, miaraka amin'ny hafatra fohy milaza ankolaka ny maha-lehilahy tsy hay tohaina an'i Putin.
Ao amin'ny volana Novambra, hitan'ilay kalandrie na dia ny andro nahatongavan'ilay sambo Rosiana tranainy mpitondra fiaramanidina mpiady ” amiraly Kuznetsov” tany amorontsirak'i Syria mba hanampy tamin'ny ady an'habakabaka aza. Hatramin'ny nahatongavan'ilay sambo, anefa, fiaramanidina roa no nianjera tamin'ny fanandramana hipetraka teo amin'ilay sambo, noho ny olana ara-mekanika teo amin'ny tokontanin-tsambo fiaingàn'ny sidina.
Ilay kalandrie dia asan'ny vondrona antsoina hoe “Citizen,” ( olom-pirenena) izay voafidin'ny Fikambanana Rosiana ho an'ny tanora mba hamorona tetikasa hitiliana ireo ” tanora mpanakanto mirona amin'ny firenena” afaka maneho ny ” soatoavin'ny firenena Rosiana sy ny kolontsaina,” ary ireo ” fandresena sy ny zavabitan'i Rosia moderina”.
Azo antoka fa tsangambaton'ny fandresen'ny Rosiana ilay kalandrie, ary ny mpanao azy dia tsy nanafina ny fanaovana tsinontsinona ny fisalasalàn'ny amerikana hanatevin-daharana ny fiarovana ny fitondran'i Assad nataon'i Maosko. Izao no nosoratan'ny mpamorona tao amin'ny fanambaràna an-gazety tamin'ny 15 Desambra :
Angamba ilay fanamarihana tao amin'ny haino aman-jery sosialy sy ireo ankizy vavy valo taona dia fantsy ho an'i Bana Alabed, ilay zazavavy kely fito taona izay avy any am-pelatanan'ireo mpikomy ny reniny no mibitsika avy any Aleppo Atsinanana. Nahazo laza tamin'ny haino aman-jery i Bana ny faran'ny volana Septambra, ka nahatonga ny valintenin-katezerana nataon'ireo mpomba an'i Assad mpisera amin'ny aterineto sy ireo mikatsaka ny hanao tsinontsinona ny fisiany. Ny 14 Desambra, navoakan'ilay haban-tranonkala mpanadihady Bellingcat ny fikarohana manaporofo marina hoe misy marina ilay ankizy vavy ary mipetraka any Aleppo Atsinanana.
Pavel Krasnorutsky no filohan'ny Fikambanana Rosiana ho an'ny Tanora, iray amin'ireo antsoina hoe “ solontenan'ny ” Filoha Vladmir Putin , izany hoe nahazo alàlana hiteny amin'ny anaran'i Putin izy nandritra ny fampielezankevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012. Rehefa azony ny fandresena, dia notazonin'i Putin ilay fandaharanasa fanomezam-pahefana, ary mbola i Krasnorutsky no mandray anjara tsy tapaka mitondra ny fahaizany manokana amin'ny resaka fanabeazana.